Mahazoa fahaiza-manao sy fiofanana tadiavinao - Topimaso momba ny fandaharam-pianarana »University of Hodges
Safidio ny Hodges University ho an'ny programa fanamarinana
Inona no maha samy hafa ny taratasy fanamarinana, ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana, ny fanamarinana ary ny mari-pahaizana indostrialy?
Ireo mari-pahaizana bakalorea dia ho an'ireo izay efa manana mari-pahaizana bakalorea farafaharatsiny fa mila fandaharam-pianarana nahazo diplaoma amin'ny fanamoriana manokana na iray hafa. Matetika, ireo izay manana diplaoma nahazo diplaoma dia hanararaotra ireo fandaharana ireo hanampiana ora enim-bolana (mazàna 18) hahazoana ny zava-bita ilaina amin'ny fampianarana amin'ny fampianarana any amin'ny oniversite.
Misarika ireo koa ireo programa ireo manohy mari-pahaizana diplaoma amin'izao fotoana izao izay maniry ny hanana fahaizana manokana amin'ny fifantohana (mazàna ora enim-bolana nahazo diplaoma) na mila ora fanampiny hahatratrarana ny ora 9 ilaina amin'ny famitana ny mari-pahaizana Master. Ohatra, ny MBA nahazo diplaoma izay ny fandaharam-pianarana dia amin'ny raharaham-barotra amin'ny ankapobeny fa ny tombotsoany sy / na ny asany dia ahitana ny Forensic Accounting and Fraud Examination na Cybersecurity, dia afaka mandray ilay taratasy fanamarinana ho "add-on" amin'ny mari-pahaizana mavesatra azy ireo ary mahafeno ny mari-pahaizana farafaharatsiny farafaharatsiny mba mampianara amin'izany famaizana voafantina izany.
Farany, Grad ny mari-pankasitrahana dia azo raisina ho toy ny mari-pahaizana irery ho an'ny fandrosoana amin'ny asan'ny tena na hanomezana fiara ho an'ny fanavaozana ny fahalalana sy ny fahalalana.
Ohatra amin'ny mari-pahaizana licence
Famandrihana kaonty forensika sy fisolokiana hosoka
Mianara bebe kokoa momba ny mari-pahaizana mari-pahaizana
Mari-pahaizana licence sy mari-pahaizana momba ny indostria
Ireo mari-pahaizana bakalorea dia natao ho an'ireo nisoratra anarana tamina programa Associate na bakalorea izay maniry mifantoha safidy safidy amin'ny faritra iray omena. Ireo programa ireo dia mamela ny mpianatra undergrad hahazo mari-pahaizana fanampiny, manome azy ireo a sisin'ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny fianarana.
Ny fandaharam-pianarana ao amin'ny Hodges University dia mandrakotra lohahevitra sy fifehezana amin'ny sehatra sahala amin'ny orinasa, siansa informatika, ary e-lalàna. Azo alaina koa izy ireo -mijoro irery, manampy ho an'ireo izay te-hanaraka faritra mahaliana manokana nefa tsy handray fampianarana kurikulum fototra.
Raha mitady hanitatra ny fahaizanao ianao, fa tsy mila te hanana programa fanamarinana matihanina iray manontolo, manolotra isan-karazany ihany koa i Hodges mari-pahaizana manokana momba ny indostria tsy-bola mety mety izany.
Rindrambaiko eBusiness na e-Business Ventures
Famolavolana sary na famokarana endrika sary
Fanohanana Teknolojian'ny fampahalalana na Fanohanana amin'ny birao fanampiana
Fandraisana an-tanana ny ezine
eDiscovery sy eLitigation
Mianara bebe kokoa momba ny mari-pahaizana licence
Fandaharana tsy momba ny trosa nohazavaina
Hodges Connect fandaharana dia natao hanomezana ny mpianatra fiofanana amin'ny fiomanana manokana amin'ny mpiasa or fandrosoanao faritra. Mahazoa fiofanana premium amin'ny programa tsy-bola toa ny Supervisor Line-First, EMT, na CPR.
Ohatra amin'ny mari-pahaizana
Ianaro momba ny Hodges Connect